Myanmar, Cambodia hold 2nd Meeting of Joint Commission for Bilateral Cooperation – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The 2nd Meeting of Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar and Cambodia was held at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw on 1 Feburary 2019 at 10:00 am. The meeting was co-chaired by U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation of the Republic of the Union of Myanmar and Mr. PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia.
During the Meeting, the two Ministers touched onawide range of issues relating to promote bilateral relations and cooperation; to enhance cooperation in trade and investment sectors; to coordinate between the two sides to develop the tourism sector by operating direct air links between Bagan and Angkor and to discuss possible signing of the MoU in further promoting religious and cultural affairs; to jointly celebrate the 65th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries in 2020, to promote people-to-people contacts; to enhance cooperation in culture, education, forestry, environment and economic sectors between the two countries; and to work together at the regional and international fora on the issues of mutual interest and concerns.
The two Ministers signed the Agreed Minutes after the meeting. After the meeting, U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation, hostedaluncheon in honour of Mr. PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International Cooperation and the delegation at Mount Pleasant Hotel in Nay Pyi Taw at 12 noon. Mr. PRAK Sokhonn, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of the Kingdom of Cambodia left Myanmar in the evening on 1 February 2019.
မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပ
မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ ပရတ်ဆုတ်ခွန်းတို့မှ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှစ်နိုင်ငံ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းပျံသန်းမှု ပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် ပုဂံ-အန်ကောဝပ် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဒေသများအကြား ခရီးစဉ်တစ်ခုအဖြစ် မြှင့်တင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျရောက်မည့် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်ခြင်း (၆၅) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အခမ်းအနားများ ပူးတွဲ ကျင်းပရေး၊ နှစ်ဖက်ပြည်သူများအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ယဉ်ကျေးမှု၊ ပညာရေး၊ သစ်တော၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေးအစရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ၌ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် မစ္စတာ ပရတ်ဆုတ်ခွန်းတို့သည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယား နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင်၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးအပြီးတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်မှ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ ပရက်ဆုတ်ခွန်း ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား မွန်းတည့် ၁၂၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ Mount Pleasant ဟိုတယ်၌ နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး မစ္စတာ ပရတ်ဆုတ်ခွန်းသည် ၃၁-၁-၂၀၁၉ ရက်တွင် နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ညပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။